SDWO Relief Project oo mashruucii sanadlaha ahaa ee Afuri dadka danyarta ah gaadhsiiyey deeq raashin ah 16 qoys oo danyar ah | SDWO.COM & SomalilandNews.net
SDWO Relief Project oo mashruucii sanadlaha ahaa ee Afuri dadka danyarta ah gaadhsiiyey deeq raashin ah 16 qoys oo danyar ah
Published on June 4, 2017 by sdwo · No Comments
Raashinkan aanu gaadhsiinay dadka danyarta ah ayaa lagu soo iibiyey lacag dhan 436 doolar oo naga soo gaadhay muwaadiniin degan dalka ingiriiska.
Nagala soo xidhiidh. Samafal@sdwo.com
Raashinkan ayaa loo qaybiyey 16 qoys oo u badan danyarta xaafada daami. Sida sawirada ka muuqata ahaa dad aan haysan wax ay ku afuraan. Sida nin maskaxda ka buka oo haysta 6 caruura. Gabadh haysata ilme xanuusanaya oo aan kacayn iyo dad kale oo aad u dhibaataysanaa.
SDWO Relief Projects oo hada shaqaynasay mudo 10 sano ah ayaa had iyo jeer deeqaha lagu soo hagaajiyo gaadhsiiya goobahii loogu soo talogalay isla markaasna sawiro ku soo bandhiga. Mudadaas ay hayadani jirtey waxa lagu soo hagaajiyey lacag ilaa 30 kun oo doolar gaadhaysa.
Hadaba hadii aad rabtid inaad gaadhsiino wixii sadaqo ah. Sida Fidrida. Sekada oo ay dadku iska dhayalsadaan oo ah mid lagugu leeyahay haday jirto lacag mudo 12 bilood ah meel kuu talay boqolna ahaatee oo ay kugu waajibtey 2.5%.
Waxa kale oo aad nagu soo hagaajin kartaan sadaqooyinka lagu afurinayo dadka danyarta ah.
Nagala soo xidhiidh samafal@sdwo.com
Daawanaayoow waa dadkaagii
Daawanaayoow waa dalkaagii.
Dowaana waxaanu bilaabidoonaa mashruucii kale ee sanadlaha ahaa ee ciidsii caruurta danyarta ah